ဂျပန်နိုင်ငံပိုင် ကျွန်းတွေပေါ် ကနေ တရုတ်ကို ဒုံးကျည်တွေနဲ့ အပီ ဆော်ဖို့ ကြံထားတဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ အစီအစဉ် (ဒီအတိုင်းဆို တရုတ်ရဲ့ ဒုံးခွင်းဒုံး စနစ်လည်း ကလေး ကစားစရာလောက်ပဲရှိတော့တယ် ) – Let Pan Daily
သူမ ရဲ့ ဆ�...
ဂျပန်နိုင်ငံပိုင် ကျွန်းတွေပေါ် ကနေ တရုတ်ကို ဒုံးကျည်တွေနဲ့ အပီ ဆော်ဖို့ ကြံထားတဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ အစီအစဉ် (ဒီအတိုင်းဆို တရုတ်ရဲ့ ဒုံးခွင်းဒုံး စနစ်လည်း ကလေး ကစားစရာလောက်ပဲရှိတော့တယ် )
Let Pan | August 23, 2020 | World News | No Comments
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက… အမေရိကန်ဟာ သူတို့ရဲ့ တရားဝင် သတင်းဌာန ကနေ သတင်းတစ်ခု ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။လိုရင်းကိုပြောရရင်… လက်ရှိ အမေရိကန်ရဲ့ ဒုံးစခန်းတွေရှိနေတဲ့ ဂူအမ်ကျွန်းဟာ…. တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆိုရင် ကီလိုမီတာအားဖြင့်… ၂ထောင် နီးပါးလောက် ဝေးတယ်လို့ သိရတယ်။ … ဒီတော့… ဂူအမ်ကျွန်းကနေ ပစ်ဖို့ ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဒုံးတွေဟာ … ကီလိုမီတာ ၁ ထောင်ပဲ ရောက်နိုင်တယ်။ … ဒီ ကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတွက် အမေရိကန်ဟာ… သူ့တို့ရဲ့ဒုံးစနစ်တွေကို အာရှမှာဖြန့်ကျက်ဖို့ စီစဉ်လိုက်တယ်။တကယ်လည်း.. ဂျပန်ပိုင် ကျွန်းတွေပေါ်ကနေဆိုရင် တရုတ်ကို ကောင်းကောင်းပစ်လို့ရတယ်လေ။
ပြီးတော့.. #ဘီးလ်လင်းစလေ ရဲ့ပြောကြားချက်ထဲမှာက…. အသံ ထက်မြန်တဲ့ Hypersonic လက်နက်တွေကို တီထွင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး…အဲ့ဒီ ဟိုက်ပါဆို့နစ်ဒုံးတွေဟာ အသံထက် ၅ဆ ပို မြန်သလို.. သမရိုးကျ ဖျက်ဒုံးတွေ ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုလည်း ဒုက္ခ ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် တရုတ်ကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ အရမ်း ထိရောက်မယ်လို့.. ပြောခဲ့တာပါ။ ..
ဒီတော့…. ဘီလ်လင်းစလေ ပြောတဲ့ အသံထက် ၅ ဆ မြန်တဲ့ ဒုံးတွေရဲ့ အစွမ်းကိုတော့ ကျုပ်တို့ မသိရသေးပေမဲ့… ခုတော့…. အရင်ထက် ဆယ်ဆ ပိုမြန်တဲ့ … တရုတ်ထုတ် လက်နက်ကြီးရဲ့အစွမ်းကိုတော့… ကျုပ်တို့နိုင်ငံ လက်တွေ့ ကြုံနေရပြီ လို့….. အော်…. တိုက်ဆိုင်တာ ဖြစ်မှာပါလေ။
🤣🤣🤣 🚀သံပါးစပ် 22.8.2020
ဂပြနျနိုငျငံပိုငျ ကြှနျးတှပေျေါ ကနေ တရုတျကို ဒုံးကညျြတှနေဲ့ အပီ ဆျောဖို့ ကွံထားတဲ့ အမရေိကနျ ရဲ့ အစီအစဉျ (ဒီအတိုငျးဆို တရုတျရဲ့ ဒုံးခှငျးဒုံး စနဈလညျး ကလေး ကစားစရာလောကျပဲရှိတော့တယျ )
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးက… အမရေိကနျဟာ သူတို့ရဲ့ တရားဝငျ သတငျးဌာန ကနေ သတငျးတဈခု ထုတျပွနျလိုကျတယျ။လိုရငျးကိုပွောရရငျ… လကျရှိ အမရေိကနျရဲ့ ဒုံးစခနျးတှရှေိနတေဲ့ ဂူအမျကြှနျးဟာ…. တရုတျနိုငျငံနဲ့ဆိုရငျ ကီလိုမီတာအားဖွငျ့… ၂ထောငျ နီးပါးလောကျ ဝေးတယျလို့ သိရတယျ။ … ဒီတော့… ဂူအမျကြှနျးကနေ ပဈဖို့ ဆိုတာက မဖွဈနိုငျဘူး။ လကျရှိပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဒုံးတှဟော … ကီလိုမီတာ ၁ ထောငျပဲ ရောကျနိုငျတယျ။ … ဒီ ကိစ်စကို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ အတှကျ အမရေိကနျဟာ… သူ့တို့ရဲ့ဒုံးစနဈတှကေို အာရှမှာဖွနျ့ကကျြဖို့ စီစဉျလိုကျတယျ။တကယျလညျး.. ဂပြနျပိုငျ ကြှနျးတှပေျေါကနဆေိုရငျ တရုတျကို ကောငျးကောငျးပဈလို့ရတယျလေ။
ပွီးတော့.. #ဘီးလျလငျးစလေ ရဲ့ပွောကွားခကျြထဲမှာက…. အသံ ထကျမွနျတဲ့ Hypersonic လကျနကျတှကေို တီထှငျ ထုတျလုပျထားပွီး…အဲ့ဒီ ဟိုကျပါဆို့နဈဒုံးတှဟော အသံထကျ ၅ဆ ပို မွနျသလို.. သမရိုးကြ ဖကျြဒုံးတှေ ကာကှယျရေးစနဈတှကေိုလညျး ဒုက်ခ ပေးနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ တရုတျကို တိုကျခိုကျရာမှာ အရမျး ထိရောကျမယျလို့.. ပွောခဲ့တာပါ။ ..
ဒီတော့…. ဘီလျလငျးစလေ ပွောတဲ့ အသံထကျ ၅ ဆ မွနျတဲ့ ဒုံးတှရေဲ့ အစှမျးကိုတော့ ကြုပျတို့ မသိရသေးပမေဲ့… ခုတော့…. အရငျထကျ ဆယျဆ ပိုမွနျတဲ့ … တရုတျထုတျ လကျနကျကွီးရဲ့အစှမျးကိုတော့… ကြုပျတို့နိုငျငံ လကျတှေ့ ကွုံနရေပွီ လို့….. အျော…. တိုကျဆိုငျတာ ဖွဈမှာပါလေ။
🤣🤣🤣 🚀သံပါးစပျ 22.8.2020
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး (၁၂) လပိုင်း ရမည် ဟု အမေရိကန် ထိပ်တန်း သိပ္ပံပညာရှင်ပြော
လူနာ ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင် ဖို့ ဆီးအိမ်ထဲမှ ဆီးတွေကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ယူပေး ခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန်
ပါကစ္စတန် ခရီးသည် တင်လေယာဉ် ပျက်ကျမှု လူ (၉၇) ဦးသေဆုံး ပြီး (၂) ဦး သာ အသက်ရှင်
ချစ်သူ ကောင်မလေးပုံ တက်တူး ထိုးရာ အဖွားကြီးပုံ ထွက်လာ၍ တက်တူးဆရာအား ဓား နဲ့ ခုတ်သတ်
သူမ ရဲ့ ဆကျဆီ ကြ ပွီး အမိုကျစား ပုံတှေ နဲ့ ညို့ အား ပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျ နိုငျသူလေး L လဈရှား
ပရိသတျတှကေို သတိရရဲ့လား လို့ ဆိုပွီး ပုံလေးတှေ တငျပေး လိုကျတဲ့ နနျးမှစေံ
ကွှခေငျြစရာ ကောငျးလှနျးအောငျ ဆကျဆီ ကလြှနျး နတေဲ့ “ဟနျသာဇေ”
ကောကျကွောငျးအလှ ပျေါလှငျလှနျးနတေဲ့ မျောဒယျ သငျးရတီခငျ
ညို့အားပွငျး တဲ့ အလှတရား တှေ နဲ့ ဆှဲဆောငျ ဖမျးစား လိုကျ တဲ့ ရှငျယှနျးမွတျ ရဲ့ ဗီဒီယို
အမိုကျစား အလှတရားတှေ နဲ့ ပုရိသတှကေို ရငျခုနျသံတှေ မွနျအောငျ ဖမျးစား လိုကျပွနျတဲ့ “သဇငျဦး”